२०७२ साल फागुन ४ गतेको कार्यक्रम नमेटिने याद को सुरुवाती स्कृप्ट..... ~ Mahesh Bhusal Muktak Singer
२०७२ साल फागुन ४ गतेको कार्यक्रम नमेटिने याद को सुरुवाती स्कृप्ट.....
फूलजस्तै फूल्नुपर्छ, झर्नु हुदैन ।
भन्थ्यो कसैले बिराम, गर्नु हुदैन ।।
मलाई यही मान्छेबाटै, सिकाइन्थ्यो..
उसैले भन्थ्यो मान्छेको, फन्दामा पर्नु हुदैन ।।
((तिमी त सधै फुल्दै जानु, मेरा त अब झर्ने बेला भो..............स्वर अन्जु पन्त))
फूल्ने र भुल्ने कुराको कहिलै ख्याल गरेन मान्छेले, जब उ कसैको जीन्दगीमा फूल बनेर आयो तब हजारौ पत्थरका प्रहारपनि सामान्य भइदिए, तर दिन यस्तो पनि आउँदो रैछ पत्थरका प्रहारहरु सहदा सहदै त्यो फूल पनि एकदिन पत्थर बन्दो रहेछ, र म कसका लागि हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिएर उही मान्छेलाई घोचीरहदो रहेछ– जसले उसलाई संरक्षण गर्यो । मान्छे कहिलै पनि आफ्नो नहुदो रहेछ बरै, बरु ज्यामितीको साध्य प्रमाणित गर्न सजिलो छ, न्यूटनको नियम घोक्न सजिलो छ, अंग्रेजीलाई नेपालीमा परिमार्जन गर्न सजिलो छ, तर मान्छेको मन बुझ्न चाँही त्यती सजिलो रैन रैछ– जती मैले सोचेको थिएँ ।
प्रिती फन्टका अक्षरहरु युनिकोड बनाउन जती सजिलो छ, त्यती नै अप्ठ्यारो छ बिगे्रको मान्छेलाई सज्जन बनाउन । यदि सजिलो हुदो हो त, प्रिती फन्टका अक्षरहरु माथील्लो बक्समा राखेर यहाँ थिचेपछि यूनिकोड बन्छ भनेजस्तै बिग्रेको मान्छेलाई माथिल्लो बक्समा राखेर सज्जन बनाउने बटन किन बनाउन सकेन गुगोलले ? दुनियाँमा रहेका हरेक चिजको खोज तलास गर्ने गुगोल इन्जिनले छुट्टीएर गएको मान्छे कहाँ गयो भनेर चाँही किन पत्ता लगाउन सक्दैन होला ? मलाई जस्तै उसलाई मेरो याद आउँछ कि आउँदैन होला भनेर किन खोज तलास गर्न सक्दैन होला ? बढो अजिव लागेर आउँछ ।
यो मान्छे अरुको प्रगती देख्नको लागि बाँचेकै हैन रैछ, बरु यसले त कसैले प्रगती गरिहाल्यो भने पनि खतम आलोचना गरेर त्यो मान्छेलाई बिफल बनाउन खोज्दो रहेछ । आफ्नो असफलताको लागि अरुलाई दोष दिन हामीलाई हाम्रै घरले सिकाउँदो रहेछ, कसरी भन्नुहोला– सायद धेरै जसोको बाल्यकालमा यस्तो घटना घटेको हुनपर्छ । जस्तो की जब हामी बच्चा थियौँ, त्यो बेला कहिलेकाँही हिड्दा हिड्दै भूँइमा लड्थ्यौँ, तब रोइरहेका हामीलाई सम्झाउन आमाले जुन ठाउँमा हामी लडेका थियौँ त्यही ठाउँमा थु थु गर्दै मेरो बाबुलाई लडाउने दुष्ट तँ होइनस् भन्दै लात्तिले भूँइमा कुल्चिन्थीन् । अनी हामी रुन बन्द गरेर सोच्थ्यौँ ‘ए मलाई लडाउने त भूँइ पो रहेछ ।’ आमाले नै गरेको भएपनि यो काम चाँही मलाई चित्त बुझेन । किनकी कुनै मान्छे लड्नुमा भूँइको दोष नभइ हिड्ने मान्छेको दोष हुन्छ, मलाई त्यस्तै लाग्छ । त्यसैले यो सधै सोच्ने गर्नु, अरुलाई एउटा औँला ताक्नु अघि चार ओटा औँला आफैतिर फर्किएका हुन्छन् । हो सोचौँ एकपटक ध्यान पुर्वक सोचाँै, एउटा निर्जीव ढुङ्गा त कुनैबेला काम लाग्छ भने अझ बिनासित्ती आफ्नै मान्छेसँग झगडा गरेर कसैले केही लछारपाटो लाउने वाला छैन, पछि दुख आफैलाई हुने हो ।
कति बाँचिन्छ र जिन्दगीमा, लालच गर्नु ।
नखुल्ने ढोकामा किन, घच–घच गर्नु ।।
अरुलाई रुवाएर, हुनेवाला के छ र...
जे गर्नु सधै सधै, सच गर्नु ।।
((बाँचीन्छ र कति कति, टुक्रिएर रहरमा............))
अगाडी बढ्ने बाहानामा धेरै मान्छेहरु आफ्नै जिन्दगी बाँच्न बिर्सीएका छन्, त्यसैले जीबन देखी कहिलै भाग्नु हुन्न । चाहे जती सुकै छिटो छिटो होस, चाहे जती सुकै हतार हतार होस, चाहे जति सुकै तनावपूर्ण तरिकाले किन नहोस, आजसम्म मैले देखेजती कोही पनि मान्छे आफ्नो चिहानभन्दा पर पुगेको छैन । जब मान्छे आफ्नो छायाँलाई बदल्ने कोषिश गर्छ, तब यस कार्यमा उ शत प्रतिशत असफल हुन्छ, पहिला आफैलाई बदल्नुस छायाँ आफै बदलिन्छ । तँपाई छायाँको पछि पछि दौडनुहुन्छ छायाँ झन झन टाढा टाढा भाग्छ, छायाँको पछि दौडन छौड्नुस त्यो तँपाइकै नजिक रहन्छ । मैले कतै पढ्को वाक्य हो यो, हुन त वाक्य पढ्न र सुन्न जस्तो सजिलो छैन जिन्दगी परिवर्तन गर्न ।
बुढापाकाहरु भन्थे, ‘‘कि मान्छेले पढेर बुझ्छ, कि परेर बुझ्छ’’ पढ्नु भनेको सिक्नु हो, पर्नु भनेको भाग्नु हो । सिक्नु र भोग्नुमा यही अन्तर छ जसरी काम नलाग्ने थोत्रा बाक्यहरु लेखेर म तँपाईलाई सुनाइरहेछु, यो त एकैछिनको मनोरञ्जन मात्रै हो, क्रिकेट र फुटवल खेलको मनोरञ्जन जस्तै, नहेर्दै के हो के हो– हेरेपछि सकियो । यस्तै हो, जब तिमी कसैलाई जगाउन खोज्छौ, व्युझाउन खोज्छौ उनीहरु तिमीलाई मन पराउँदैनन् । निन्द्रा बिथोलेको आरोपमा तिमीले कुटाइ पनि खानुपर्ने हुन सक्छ, गल्ती औल्याइदिनु र ज्ञान बाँड्नु पनि अरुलाई व्युझाउनु जस्तै हो, यो काममा पनि सधै जस नमिल्न सक्छ ।
कसै गरेपनि सुखै छैन, नबोल्यो लाटो भन्छन्, थोरै बोल्यो घुसघुसे भन्छन्, ठिक्क बोल्यो गम्भिर भन्छन्, बढि बोल्यो कुरौटे भन्छन् । कसै गरेपनि मान्छेको नजरमा राम्रो बन्न सकिएन, न त प्रेम गर्न नै जानियो । फोन गरेन बिर्सियो भन्छन्, थोरै गर्यो शंका गर्छन्, ठिक्क गर्यो माया पुगेन भन्छन् र धेरै गर्यो दिक्क बनायो भन्छन् । लौन म के गरुँ, किन हरेक मान्छेहरु आलोचना मात्रै गर्छन्, कुनै पनि कुरा जानेको छु भन्नु बेकार हो– यदि त्यसलाई व्यवहारमा लागु गरिदैन भने, बास्तिविक ज्ञान व्यवहारले देखाउँछ, बोलिले होइन । जसलाई जानेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ उसले सिक्न सक्छ तर जसमा नजानेर पनि जानेको छु भन्ने भ्रम हुन्छ नी त्यसले कदापी सिक्न सक्दैन । एउटा मैनबत्ती जल्न समय लाग्छ, जब एउटा मैनबत्ति जल्छ त्यसले हजार मैनबत्ति जलाउन सक्छ । हेर्नुस मैनबत्ति आगो हो यसले शरिर जलाउला तर मन जलाउन सक्दैन, तर प्रेम कुनै आगो होइन, न त कुनै आगोको झिल्का हो तर यसले हजारौँ मान्छेको मन जलाउन सक्छ । हो आज यस्तै भइरहेछ.........
अनुहार राम्रो होइन, उसको आनी बानी हुने हो ।
आफ्नो घमण्डले आफैलाई, हानी हुने हो ।।
यो मान्छेले यति, सजिलै बिर्सीरहेछ....
म जलेर एकदिन, खरानी हुने हो ।।
((आकाश छोप्ने कालो बादल, मेरै लासको धुवाँ बन्ला...............))